जित्यो नेपाल ले जित्यो पहिलो टि २० सिरिज हौसला स्वोरुप पुरा पढी सेयर गर्दै जाऔ ! —
जित्यो नेपाल ले जित्यो पहिलो टि २० सिरिज हौसला स्वोरुप पुरा पढी सेयर गर्दै जाऔ !
१९ माघ, काठमाडौं । तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा यूएईलाई १४ रनले हराउँदै नेपालले ऐतिहासिक टी-२० सिरिज जितेको छ । वर्षाका कारण १० ओभरमा छोट्याइएको तेस्रो तथा अन्तिम टी-२० मा नेपालले यूएईलाई १०५ रनको लक्ष्य दिएको थियो । तर, यूएईले ८ विकेट गुमाएर ९० रन मात्र बनाउन सक्यो ।यूएई भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले पहिलो टी–२० खेल २ -१ ले जितेको छ । एक दिवसीय सिरिज २–१ ले जितेको नेपालले टी –२० सिरिज पनि २-१ ले जितेको छ ।
राम्रो फर्ममा रहेको नेपाली टोलीले टी–२० सिरिज जितेर नेपालसामु अर्को इतिहास रचेको छ । जारी सिरिजमा नेपाली ब्याट्सम्यानले पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् भनी प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
एक दिवसीय सिरीजअन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा तीन विकेटको पराजय बेहोरे पनि दोस्रो खेलमा सानदार खेल खेल्दै १४५ रनको जित हासिल गरी सिरिज बराबरी गरेको थियो । तेस्रो खेलमा पनि २५५ रनको कठिन लक्ष्य नेपालले पछ्याउँदै प्रशंसायोग्य जित हासिल गर्दै सिरिज जितेको थियो ।
गएको वर्ष मार्चमा एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएको नेपालले स्वतः टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस ! सालको पात गाउदा विवाद मा परे रबि ओड
१९ माघ, काठमाडौं । अहिलेको बहुचर्चित लोकदोहोरी ‘सालको पात टपरी हुने ए बरै…’ लाई स्टेजमा खराब तरिकाले गाएपछि दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओड विवादमा मुछिएका छन् । लोकदोहोरीका संगीतकार बसन्त थापाले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
अस्ट्रेलिया मा रबि ओड ले सालको पात गाउदा यसरि विवाद मा परे हेर्नुहोस !
सागर आलेले बनाए यस्तो राम्रो घर अब बिहेको तयारि हुदै पुरा हेर्नुहोस भिडियो सहित